Home Wararka Kooxda cunaqabateynta qaramada midoobay oo loo sameeyay mandate cusub (Akhriso)
Kooxda cunaqabateynta qaramada midoobay oo loo sameeyay mandate cusub (Akhriso)
Kaddib markii Qaramada Midoobay ay ka saareen liiska cunaqabateynta dalka Eriteriya aya waxaa sidoo kale la bedelay qaabkii howlgalka ee ururkii la oran jiray kooxda cunaqabateynta ee Soomaaliya iyo Eriteriya, waxaana loogu magac daray hadda guddiga qubarada ee dabagalka Soomaaliya.
Kooxdan aya waxa ay howsheedu bilaaban doonta bilowga sanadka cusub ee 2019 waxaana ay howsha loo xilsaaray ay noqoneysaa sida hoos ku qoran
kormeerida iyo baaritaanka hirgelinta xayiraadda lagu soo rogay Soomaaliya (xayiraadda hubka, xayiraadda safarka, xayiraadda hantida, iyo xayiraadda dhuxusha);
Qiimaynta tallaabooyinka ay qaadeen madaxda Soomaalida, iyo sidoo kale Dawladaha xubinta ka ah, gaar ahaan, kuwa gobolka, si buuxda u hirgelinayaan nidaamka xayiraadda hubka;
sameyso talooyin qaas ah oo ku salaysan xog faahfaahsan oo ku saabsan meelaha khuseeya khibradaha la xiriira xadgudubyada iyo tallaabooyinka lagu siinayo waxtarka iyo xoojinta fulinta xayiraadda hubka ee dhinacyo kala duwan ah;
baaritaan, iyada oo lala kaashanayo hay’adaha caalamiga ah ee la xidhiidha, dhammaan hawlaha, oo ay ka mid yihiin kuwa maaliyadeed, badda iyo qaybaha kale, kuwaas oo keena dakhliyada loo isticmaalo in lagu sameeyo xad gudubka xayiraadda hubka ee Soomaaliya;
baaraan nooc kasta oo ka mid ah gaadiidka, waddooyinka, dekedaha, garoomada diyaaradaha iyo xarumaha kale ee loo isticmaalo xadgudubyada xayiraadda hubka ee Soomaaliya;
Ka caawinta Guddiga soo ururinta macluumaadka shaqsiyaad ku jira liiska xayiraadda baaraan shakhsiyaadka iyo hay’adaha ku jira xayiraadda;
ururinta, iyo cusboonaysiinta macluumaadka liiska mashruucyada liiska shakhsiyaadka iyo hay’adaha kuwaas oo suurtogal u ah inay buuxiyaan shuruudaha liisaska ee tallaabooyinka mustaqbalka ee mustaqbalka Golaha Ammaanka;
baaritaan ku samee hawlaha dekedaha ee Soomaaliya oo keeni kara dakhli Al-Shabaab;
In si dhow ula shaqeeyaan Guddiga talobixin gaar ah oo ku saabsan tallaabooyin dheeraad ah si loo hagaajiyo guud ahaan jaangoynta cabbiraadda cunaqabataynta;
ka caawinta aqoonsashada meelaha ay awooddooda ku leeyihiin gobolka si loo xoojiyo fulinta tallaabooyinka cunaqabateynta;
Warbixinta guddiga iyo gudida qiimeynta horumarka ay sameysay guddiga DF si loo dhiso kaabayaasha si loo xaqiijiyo kaydinta amniga, diiwaangelinta, dayactirka iyo qeybinta qalabka milatari ee Ciidamada Nabadgelyada, iyo sidoo kale horumarka ay sameeyeen DF in la dhiso habraaca iyo qawaaniinta anshaxa ee diiwaangelinta, qaybinta, isticmaalka iyo kaydinta hubka Ciidamada Nabadgelyada ee DF, iyo baahiyaha tababarka;
bixinta qiimeyn kasta oo khalad ah ama iibinta hubka, iyo qalabka millatariga ee kooxaha kale, oo ay ka mid yihiin miliishiyooyin, si loo caawiyo Golaha Ammaanka dib-u-eegis kasta oo ku habboon ee cunaqabateynta hubka ee la bedelay ee Soomaaliya;
warbixinta ku saabsan awoodda ay u leedahay in la kormeero keenista hubka, qalabka milatari iyo gargaarka Soomaaliya;
soo gudbinta, si loo tixgaliyo Golaha Ammaanka, iyada oo loo marayo Guddiga, warbixinta oo ka hadlaysa dhammaan dhinacyada waajibaadkooda;
bixiyaan macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah oo ku saabsan burburinta jawiga deegaanka ee suurtogalka ah ee dhuxusha Soomaaliya;
warbixinta ku saabsan hirgelinta garsoorka badda ee dhuxusha iyo hubka;
DF waxay soo gudbinaysaa warbixin ku saabsan warbixinteeda guddiga iyo in Golaha Amniga si joogto ah loogu wargaliyo fulinta sharciga federaalka ee ku meel gaarka ah ee ku saabsan xayiraadda hubka ee dib u habeynta hubka ee Soomaaliya.
Previous articleSoomaaliya oo ku socoto wado aay adkaan doonto in dib looga laabto
Next articleMaxkamada Ciidamada Jubbaland oo maanta xukun dil ah fulisay